သတင်း - တရုတ်ထုတ်ကားဟောင်းများတင်ပို့ရန်။
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတရုတ်ပြည်တွင်ကားဟောင်းနှင့်ကားဟောင်းများ၏စျေးနှုန်းသည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှင့်တဖြည်းဖြည်းချိတ်ဆက်လာသည်၊ အထူးသဖြင့်ကားဟောင်းများစျေးပိုသက်သာလာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကားဟောင်းများတွင်နှစ်နှစ်မောင်းပြီးသောအခါကားများစွာကိုရောင်းသည်။ အရည်အသွေးပြဿနာသည်ယုံကြည်ထိုက်သည်။ တရုတ်ကားများ၏အရည်အသွေးသည်တိုးတက်လျက်ရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများစွာသည်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်သုံးသောတရုတ်ကားများကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမည်။
ဒါဟာကားတွေတင်မဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းတရုတ်ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးအလုံးစုံသောစျေးနှုန်းများသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်လာခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာ၎င်းတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ထို့အတူကားအသစ်တစ်လုံး၏ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းသည်ကားအသစ်ထက်စျေးနှုန်းမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြင့်မားသောကွဲပြားသောကားစီးရီးများနှင့်ပုံစံသတ်မှတ်ချက်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
၂။ ၎င်းသည်ချွေတာပြီးဆုံးရှုံးမှုနည်းသည်။ တူညီသောစတိုင်လ်ကားတစ်စီးကိုကားသစ်ထက်တစ်ဝက် (သို့) နည်းသောနည်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
3. မြင့်မားသောခြံနှုန်း။ တပတ်ရစ်ကားများ ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ် ၀ ယ်ခွန်အပေါ်ငွေအများကြီးချွေတာနိုင်ပြီးပြန်လည်ရောင်းချရာတွင်ဆုံးရှုံးမှုမရှိချေ။
4. အစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာလိုက်ဖက်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သုံးပြီးကားများသည်နောက်နှစ်နှစ်အကြာတွင်မော်ဒယ်များဖြစ်သည်။ ကားအစိတ်အပိုင်းများ၊ အလှအပ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကား၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အော်တို ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်အသံနှင့်ရင့်ကျက်လာပြီးအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ကားပိုင်ရှင်များသည်အော်တိုအပိုပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန် ၀ န်းရံရန်မလိုပါ။
ဤအားသာချက်များကြောင့်အသုံးပြုသောကားသည်ချွေတာနိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်ကားပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သုံးပြီးကားနှင့်ကားအသစ်အကြားစွမ်းဆောင်ရည်အသုံးပြုမှုကွာခြားချက်မရှိသောကြောင့်တပတ်ရစ်ကားသည်လူတို့၏ရွေးချယ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ များမကြာမီတရုတ်ပြည်မှတင်ပို့သောတစ်ပတ်ရစ်ကားစျေးကွက်သည်ပိုမိုရင့်ကျက်လာပြီးစံချိန်စံညွှန်းမီလာလိမ့်မည်။
1. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု။ ယာဉ်မတော်တဆမှုယာဉ်များ၊ မီတာညှိယာဉ်များနှင့်တရားမဝင်ယာဉ်များမပါ ၀ င်သောရှာဖွေမှုကိုလက်ခံသောယာဉ် ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်ထောက်လှမ်း; ယာဉ်သတင်းအချက်အလက်အမြန်
2. ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလေလံသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း၊ ပို့ကုန် ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပလက်ဖောင်း
၃။ စျေးကွက်နှင့်ဥပဒေသုတေသန။ ပြည်ပသုံးကားစျေးကွက်၊ ပြည်ပမှသွင်းကုန်စည်းမျဉ်းများ၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းသူရွေးချယ်ခြင်း
4. အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှု။ ကုန်ပစ္စည်းအန္တရာယ်၊ နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံရေးတင်သွင်းမှုမူဝါဒအန္တရာယ်၊ ငွေလဲနှုန်းနှင့်ဖြေရှင်းမှုအန္တရာယ်
တရုတ်နိုင်ငံမှတင်ပို့သောကားဟောင်းအားလုံးသည်အပြင်ထွက်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်လည်းအပိုပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရေး၊ ရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေပြင်အခြေခံ။
ပြည်တွင်းပို့ကုန်စုဆောင်းမှုစနစ်၊ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းစနစ်၊ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်၊ e-commerce ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းစနစ်၊ ပြည်ပရောင်းချမှုစနစ်၊ သိုလှောင်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုစနစ်၊ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့ရေးစနစ်၊ ပြည်ပရောင်းချမှုစနစ်၊ traceability စနစ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသောကားတင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းသည်ကွမ်ကျိုး၊ Nansha ဆိပ်ကမ်း၌ရွက်လွှင့်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမိုင်းတွင်အရေးပါသောသမိုင်းကြောင်းအရအရေးပါသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
တရုတ်ကားဟောင်းတင်ပို့မှုသည်စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်းအဝတ်အစားများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကဲ့သို့မူဝါဒများပံ့ပိုးမှုဖြင့်တရုတ်သည်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောကားတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများနှင့်တဖြည်းဖြည်းလိုက်မီလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကားတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ စျေးကွက်၏တဖြည်းဖြည်းစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီတရုတ်တွင်သုံးကားလုပ်ငန်းအတွက်မူဝါဒများနှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများရှိသည်။ အနာဂတ်တွင်ကားသုံးစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အပူဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။